Rakhiyeyaasha Qalabka Kumbiyuutarka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka ah iyo Warshadda | YiZheng
Muxuu yahay Mashiinka Wareejiya Suumanka Suunka?
Ku Mashiinka Xambaara Suumanka Suunka waxaa loo isticmaalaa xirxirida, rarida iyo dejinta badeecadaha ku jira keydka iyo bakhaarka. Waxay leedahay faa'iidooyinka qaabdhismeedka is haysta, hawlgal fudud, dhaqdhaqaaq habboon, muuqaal qurux badan.
Mashiinka Xambaara Suumanka Suunka sidoo kale waxay ku habboon tahay wax soo saarka bacriminta iyo gaadiidka. Waa mashiinka khilaafku kaxeeyo oo si joogto ah u daabula qalabka. Waxay inta badan ka kooban yihiin hayayaashii, suunka conveyor, rullaluistemadka, qalab xiisad iyo qalabka gudbinta.
Mabda'a Shaqada Mashiinka Wareejiya Suumanka Suunka
Nidaam wareejin qalab ayaa la sameeyaa inta udhaxeysa barta bilowga quudinta iyo barta ugu dambeysa ee dheecaanka ee xariijin gaar ah. Ma fulin karto oo keliya daabulidda qalabka kala firdhisan, laakiin sidoo kale waxay qaadi kartaa gaadiidka alaabada dhammaatay. Gaadiidka walxaha fudud ka sokow, waxay sidoo kale la kaashan kartaa shuruudaha habka farsamada ee shirkadaha kala duwan ee warshadaha si ay u sameeyaan layn socod socod hawleed socod.
Astaamaha Mashiinka Wareejiya Suumanka Suunka
1. Qaab dhismeed sare oo fudud, fudud in la ilaaliyo.
2. Awood wareejin sare iyo masaafad wareejin dheer.
3. Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay macdanta, macdanta iyo warshadaha dhuxusha si loogu wareejiyo alaabada bacaadka ama buro, ama alaabada la baakadeeyay.
4. Waa qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah mashiinnada aan caadiga ahayn ee xaaladda gaarka ah ku sugan.
5. Waa loo habeyn karaa.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Soo Saara Video
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xaragada
Ballaca Suunka （mm)
Dhererka Suunka （m) / Awood （kw)
Xawaare （m / s)
Awood （t / h)
Hore: Khadka Tooska ah ee gariirka
Xiga: Wareejiyaha Suumanka Moobilka La qaadan karo